आफ्नै श्रीमानलाई फोन गर्दा तपाईँले खोजेको मान्छे म हैन भनेर फोन काटिदिन्छन्, सरकारी डाक्टरसंग लभ गरेर बिहे गर्दा यस्तो भयो (भिडियोसहित) – Nepali Taja Khabar
बाग्लुङ्ग । बाग्लङ्गकी लीला परियार । जो यतिबेला एउटी आफ्नै श्रीमानबाट पिडित भएर न्यायकोलागी न्यायलयको ढोका कसरी घचघच्याउने भन्दै भौतारि रहेकी छन् । आफ्नै गाउँमा डाक्टरको रुपमा गएका लीलाका श्रीमान बलिरामले लीलालाई आफुले मन पराउने कुरा बताए ।
उमेर परिपक्क नभएपनि लीलाले बलीराम सामू जातको कुराले उनीसंग बिहे गर्न नसक्ने बताईन् । तर डाक्टर भनेर गाउँमा चिनिएका अहेव बलिरामले जातको लीलाले गरेको जातको कुरालाई स्वीकार गरेनन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
अन्ततः उनले लीलालाई फकाएरै अनि मनाएरै लीलाको मन जीतेर नै छाडे । बलिरामको माया र सम्मानलाई मध्यनजर गर्दै लिलाले पनि सबै सामाजिक बन्धनहरु तोड्दै बलिरामसंग बिहे गरिन् । बिहे गरको १ वर्ष निकै खुशी खुशी बित्यो लिला र बलिरामको वैबाहिक जिन्दगी ।
तर जब जागिरको शिलशिलामा बाग्लुङ्गबाट सिन्धुली सरुवा भएर बलिराम आए त्यसपछि शुरु भयो लिलाको जीवनमा औंशीको बालो रात । हाँसी खुशी बिदा भएर आफ्नो श्रीमती र छोराबाट छुट्टीएका बलिराम आखिरमा किन एकाए परिवर्तन भए त भन्ने कुरा वि.सं. २०६० सालदेखि लिलाले थाहा पाउन सकेकी छैनन् ।
जस्लाई जीवन सुम्पिईन् उसैले नै जीवनलाई घर नघाटको बनाईदिएपछि आखिरमा लिलाले पनि के नै गर्न सक्छिन् र ? तरपनि उनले जे जति गर्न सकेकी छन् त्यही गरिरहेकी छन् ।
आज उनको छोरा पनि ठूलो भएका छन् । छोराले प्लस टू पढ्ने भएका छन् । तर बाबुको अत्तोपत्तो छैन । लिलाका छोराले बाबुको नामको नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । बलिरामलाई लिलाले फोन गर्दा बलिराम मरिसक्यो । तपाईँले खोजको मान्छे हैन भन्ने जवाफ पाउँछिन् । भिडियोसहित
काठमाडौंमै ५० रूपैयाँमा सादा खाना, ६० रूपैयाँमा मासु भात
दरवार ह त्याकाण्ड हुँदा आफु अगाडी नै रहेको र आफुले देखेको कुरा यसरि बताइन हिमानिले (भिडियो सहित )
अमेरिका बाट आएर बिहे गर्दा सु हा गरा तको दिन बुहारी मा जब छोरा ले यस्तो खो ट देख्यो, त्यसपछि घर,मा ख ल्लब ल्ल भयो